Hor fadhiga badan ee internet-ka oo wax yeello u geeysta maskaxdda carruurta | Somaliska
Culimadda ku xeel dheer cilmiga bulshadda iyo caafimaadka carruurta ayaa had iyo goor ka diga halista uu leeyahay isticmaalka badan ee carruurtu isitcmaasho aaladda internet-ka.
Daraasad cusub oo dhawaan ay sameeysay hey’ad laga leeyahay dalka Ingiriiska ayaa ka digtay halista ka imaan karta iyo waxyeeladda caafimaad ee u geeysto carruuraha gaar ahaan kuwa waqti badan dul fadhiya kombiyuuter-ka iyo aaladda internet-kaba.
Daraasadan ayaa sidoo kale sheegtay in baaritaano ay sameeysay lugu ogaaday in carruuraha hor fadhigga kombiyuuter-ka iyo internet-ka ina ka badan afar saac toddobaadkii ay maskaxda carruuraha ku dhaco dhibaato.
Wargeyska Guardian ee ka soo baxa dalka Ingiriiska oo warbixinta lugu qoray ayaa sheegay in waxa loogu yeero “aqoonta internetka 24 saac toddobaadkii” ay isbadal ku keento xaaladaha maskaxeed ee carruurta kuwaas oo ay ka mid yihiin dareemo argagax leh, cadaadis, baqdin iyo niyad jab oo ay kala kulmaan barahaasi tarbiyada lugu sheegay.
Ugu dambeyntiina hey’adani waxaa ay farta ku fiiqday in dhalaanka da’doodu dhaxayso 11 ilaa 14 ka daawadan internet-ka waxyaabaha faxshiga ahee qurunka ah.